सेञ्चुरी बैंकमा खाता खोल्ने कर्मचारीलाई गज्जब अफर, रु. १ हजारको खाता खोल्दा रु. ८ लाखको बिमा सुविधा Bizshala -
सेञ्चुरी बैंकमा खाता खोल्ने कर्मचारीलाई गज्जब अफर, रु. १ हजारको खाता खोल्दा रु. ८ लाखको बिमा सुविधा
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरेर रु. १,००० मा बचत खाता खोल्ने गरी ‘प्रीमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता’ वार्षिक ६.५ प्रतिशतका दरले त्रैमासिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गरी शुभारम्भ गरेको छ ।
ग्राहकहरुले रु. ७,००,०००(सात लाख) बराबरको आकस्मिक दुर्घटना बीमा र रु. १,००,०००(एकलाख) सम्मको अस्पतालमा बसेको खर्च बापतको बीमा तथा लकर सुविधा, क्रेडिट कार्डको वार्षिक शुल्क, ब्यालेन्स सर्टिफिकेट र गुड फर पेमेन्टमा ५० प्रतिशत छुटको सुविधा पाउने बैंकले जनाएको छ ।
साथै निस्शुल्क एस.एम.एस, मोबाइल र ई-बैंकिङ्ग, एबीबीएस सेवा, डेबिट कार्ड तथा निस्शुल्क क्रेडिट र्काडको आबद्ध शुल्कको सुविधा छ । सरल कर्जा प्रवाह बैंकका सबै शाखाहरुबाट प्राप्त गर्न पनि सकिने बैंकले प्रष्ट्याएको छ ।
ब्याजदरको सिण्डिकेट तोडियो, साउन १ देखि बैंकहरुले आफूखुशी
काठमाण्डौ । भद्र सहमतिको नाममा बैंकहरुले कायम गरेको ब्याजदरको...
मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्ने: भट्ट
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी...
बैंकहरुको ब्याजदर सिंगल डिजीटमा आउँदै: ढुंगाना
काठमाण्डौ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल...
एकैदिन सनराइज बैंकका थप ४ शाखा र १ विस्तारित काउन्टर
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेड शाखा विस्तारमा आक्रामक देखिएको...
नबिलद्वारा ‘डिजी बैंक’ स्थापनाको घोषणा
काठमाण्डौ । नबिल बैंक लिमिटेडले डिजिटल बैंकिङमा नेतृत्वदायी...
देवःलाई प्राप्ति गरेको कुमारी बैंकको एकीकृत कारोबार आजबाट
काठमाण्डौ । देवः विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेर कुमारी बैंक लिमिटेडले...